အခမဲ့ BASAL-ဗီရို - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု - ကသင်မြင်ရသည့်အခါတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူ chat ဖို့ ပို. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ရေး၏ရက်စွဲပုံစံကအရမ်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုသူများသည်က webcam ကိုဖွင့်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒီ feature ကိုသုံးနိုင်သည်။ တကယ်တော့ရှုပ်ထွေးဘာမှမရှိဘူးရဲ့, ဒါပေမယ့်ဒီဆောင်းပါးထဲမှာသင်က laptop ကိုအပေါ်ကင်မရာကိုသုံးဖို့ဘယ်လိုပေါ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေ့လိမ့်မည်။
windose 8 အတွက် webcam ကိုဖွင့်မည်
သင်ကတီဗွီကင်မရာချိတ်ဆက်ကြောင်းသေချာပေမယ့်တချို့အကြောင်းပြချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်မနိုင်ပါကသင်ရုံသူမ၏နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ဦး Laptop ကိုဖွင့်မသတ်မှတ်နေဖွယ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကင်မရာချိတ်ဆက်ခြင်းမသက်ဆိုင်ကြောင့် In-built သို့မဟုတ်ခရီးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ၏, တူညီတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်သည်တစုံတခုကိုလုပ်ပေးမီ, သငျသညျလက်ရှိ version ကို device ကို software များကိုလုပ်ကိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ရှိသေချာပါစေ။ သငျသညျထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပေါ်နိုင်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးအထူးအစီအစဉ်ကို (ဥပမာ, DriverPack Solution) ၏အားသာချက်ယူက download လုပ်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ယာဉ်မောင်းကို update လုပ်နည်း
windose 8 မှာဖွင့်ဖွင့်ကောက်မရနိုငျနှင့်ဝဘ်ကင်မရာကိုဖွင့်: ကပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရပါမည်, device ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်အရာ။ သငျသညျစံကိရိယာများ, အပိုဆောင်းဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ဝဘ်ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။
Method ကို 1: Skype ကိုအသုံးပြုခြင်း
Skype ကိုအတူအလုပ်လုပ်ဖို့ webcam ကိုထိန်းညှိဖို့အမိန့်မှာ program ကို run ။ ပစ္စည်းအဘို့အထိပ် panel ကိုကြည့်ခုနှစ်တွင် "Tools" နှင့်ကိုသွား "Settings" ကို။ ထိုအခါ tab ကိုသွားပါ "ဗီဒီယို Settings" ကို နှင့်အပိုဒ်အတွက် "webcam ကို Select လုပ်ပါ" သင့်ရဲ့ device ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်တစ်ဦး Skype ကိုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွက်အခါ Now ကို, ပုံသင်ရွေးချယ်ထားသောကင်မရာကနေထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Skype ကိုအပေါ်ကင်မရာကို set up လုပ်နည်း
Method ကို 2: Web ကိုဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်
သင်သည်မည်သည့်ကို web service ကိုဖို့ဘရောက်ဇာထဲမှာကင်မရာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်, အဘယ်သူမျှမကြီးတွေသဘောတူညီမှုလည်းရှိသေး၏။ လိုချင်သောက်ဘ်ဆိုက်သွားပြီး, နှင့်အဖြစ်မကြာမီ webcam ဖို့ဝန်ဆောင်မှုလိပ်စာအဖြစ်သင် device ကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုချက်အဘို့အသတိပေးခံရလိမ့်မည်။ သင့်လျော်သောခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Method ကို 3: စံ tools များအသုံးပြုခြင်း
Windows တွင်သင်တို့ကိုလည်းဗီဒီယိုအားမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ်သင့် webcam နဲ့ရုပ်ပုံယူခွင့်ပြုသည့်အထူး utility ကိုရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာသွားပါ "Start" နှင့်လျှောက်လွှာစာရင်းကိုအတွက်နေရာချထား "ကင်မရာ"။ အဆင်ပြေဘို့, ရှာဖွေရန်အသုံးပြုပါ။
သင်စကားမစပ် Windows 8 OS ကိုအတူလက်ပ်တော့အပေါ်တစ်ဦး webcam အလုပ်မလုပ်ဘဲနေလျှင်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိဒါ, ဒီညွှန်ကြားချက် OS ကိုတခြားမူကွဲများအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့သင်ကူညီနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: Como CALCULAR os juros do CARTÃO DE CRÉDITO Nubank, Itaú, Inter, meupag corretamente! Fácil! (စက်တင်ဘာလ 2019).